Gabdho Wariyayaal ah Oo Baydhabo Tababar loogu soo xirey(SAWIRO) – Radio Baidoa
Suxifiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ oo kaashanaya hay’adda hormarinta Warbaahinta ee Dalka Finland ee VIKES ayaa Magaaladda Baydhabo tobobar soconayay 2 maalmood ugu so xirtay 20 Gabdhood oo saxafiyiin ah oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee Warbaahinta Madaxa-banaan ee ka howl-gasha Maamulka K/Galbeed Soomaaliya
Tobobarkan oo u jeedkiisu ahaa in la kobciyo korna lo qaado Aqoonta Gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka howlgala Warbaahinta. waxaan si gaar ah diiradda loogu saaray maalmihii uu socday Cilmiga kaamirada; habka Muuqaal duubista, jarjarista iyo casharo kale oo Muhiim ah oo ay ka mid yihiin, Xeerka Anshaxa Saxaafadda, hab-ka isku dheelitirka warka, awood-siinta gabdhaha shaqeeya iyo Xirfadda Waraysiyada.
FESOJ, waxay Tobobarkan mid la mid ah horay ugu fulisay Magaalooyinka Jowhar, Muqdisho, Garowe, iyo Kismaayo. Baydhabo kadibna waxay ka fulindoonta Hadii ALLE idmo Magaalooyinka Dhuuso-mareeb iyo Magaalooyin kale. 350 Wariye ayaa ka faa’iidaysay lixdii bilood ee la so dhaafay Tobobarada FESOJ.